မေတ္တာတုံးစရာကောင်းသော သူငယ်ချင်း(၇)မျိုး -
Posted on December 10, 2018 December 10, 2018 Author Christina Rosy	Comment(0)
သူငယ်ချင်းတွေဆိုတာ ဘဝရဲ့အရေးအကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းတွေထဲက တစ်ပိုင်းပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း သူငယ်ချင်းကနေ သူငယ်ဂျင်းအဖြစ်ပြောင်းပြီး ကိုယ့်ကို ပြန်ကန်တတ်တာမျိုးရှိတော့ ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ် တစ်ခါတလေကျ အတော်ကို မေတ္တာတုံးစရာကောင်းတာပါ။ မေတ္တာတုံးစရာကောင်းတဲ့ ဂျင်းကောင်တွေကတော့
သူငယ်ချင်းအစုံအလင် တစ်နေရာရာသွားမယ်ဆိုပြီး စီစဉ်ပြီးခါမှ အဖျက်သမားတစ်ယောက် ဝင်နှောင့်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအဖျက်သမားလည်း နှောင့်ရော ကျန်တဲ့လူတွေလည်း တကွဲတပြားတွေဖြစ်ပြီး အစီအစဉ်ဖျက်လိုက်ရရော။ ပြောသာပြောရတယ်။ အက်ဒမင်လည်း အဖျက်သမားပါ :3
သူ့ကြည့်တော့ ရည်းစားရတာ သက်တမ်းမရင့်သေး။ ကိုယ်တွေလို ဝါရင့်FAတွေကို အားရင်အားသလို ရိသဲ့သဲ့ပြောချင်တာနဲ့၊ နှိမ်ချင်တာနဲ့။ သူ့ရည်းစားနဲ့ ရန်ဖြစ်တော့ မျက်ရည်မျက်ခွက်နဲ့ ကိုယ့်ဆီပဲရောက်လာတာပဲကို။ အဲဒီလို အနှိမ်ပါရဂူတွေဆိုတာ မေတ္တာတစ်စက်မှကို မထားချင်စရာပါပဲ။
၃။ ဘယ်သွားသွား ပိုင်ရှင်ခေါ်လာသူ
တစ်ခါတလေလေး ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေ စုပြီး ခရီးထွက်မယ် ကြံပါတယ်။ “ငါ့ဘဲပါ ခေါ်လာမယ်”ဆိုတဲ့ RSမတွေက တစ်မျိုး။ သူတို့ကိုကိုနဲ့ ချိန်းတွေ့ရင်ကျ ကိုယ်တွေ လိုက်ရတာ ကျလို့… ငင်းငင်း။
၄။ ရှော့ပင်း ဂျင်းကောင်
ရှော့ပင်းထွက်ရင် ကိုယ့်ပိုက်ဆံ မပြုတ်ပြုတ်အောင် “ဟဲ့၊ အဲဒီ အင်္ကျီလေးက နင်နဲ့လိုက်တယ်” ဘာညာသာရကာ ဂျင်းလေးထည့်ပြီး မားကက်တင်းဆင်းပေးတဲ့ သူငယ်ဂျင်းကောင်းတွေလည်း မေတ္တာတုံးတဲ့ စာရင်းထဲပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေ ကိုယ့်အိမ်လာမယ်ဆို ကြောက်ရပါပြီ။ လာတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒင်းတို့ပြန်သွားရင် ကိုယ့်မှာယူနီဖောင်းမပါတဲ့ သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းဖြစ်ပြီ။ ၅နှစ်ကလေး အိမ်လာရင်တောင် အဲ့လောက် လက်မသရမ်းလောက်ဘူး။ ယူတို့ကို အာ့ဒီအချိန် သိပ်မုန်းပါဒေနော်..
၆။ အဲဗား ဟဟပေးသူ
ရှိတယ် ရှိတယ်။ နေမကောင်းတဲ့ ပို့စ် တင်ရင်တောင် ဟဟပေးပြီး “မွင်းငါးစားရတော့မှာလား” ဆိုတဲ့ ကျက်သတုံး မေတ္တာနူကောင်တွေ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ရှိကိုရှိတယ်။
၇။ ဆရာဝင်လုပ်ရတာ ဝါသနာပါသူ
ဘာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် ဆရာဝင်လုပ်လိုက်ရမှ အစာကြေတဲ့သူတွေ ရှိတယ်။ ငါသိ၊ ငါတတ်၊ ငါတော်ဆိုတဲ့ ဒင်းတို့ကို ပြိုင်မပြောတာ ကောင်းတယ်။ မဟုတ်ရင် အခင်အမင်ပျက်ရဦးမယ်။
တကယ်တော့လေ.. ဘယ်လိုပဲ သူငယ်ဂျင်းတွေလို့ ပြောပြော မပြတ်နိုင်တာလည်း ကိုယ်တွေပါပဲ။ မတည့်အတူနေ၊ မမြင်ချောင်းကြည့် အမျိုးအစားတွေကိုး 😛 တစ်ခုခု တိုင်ပင်စရာ ရှိရင် သေချာနားထောင် အကြံပေး (အတည်ပြောနေရင်း ဖောက်သွားတာတော့ တစ်ပိုင်းပေါ့လေ)၊ ငိုစရာရှိ ပုခုံးငှားပေး၊ ပျော်စရာရှိ အတူတူပျော်၊ ကိုယ်နာစရာရှိ ကိုယ့်ထက်တောင် ရင်နာပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရှိတာ ကံကောင်းခြင်းတွေထဲက တစ်ခုပဲ မဟုတ်လား…
ကဲ.. ယောင်းတို့ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာရော… အဲဒီလို မေတ္တာတုံးစရာကောင်းပြီး မချစ်ရလည်း မနေနိုင်တဲ့ သူငယ်ဂျင်းတွေ မရှိဘူးလား? မန်းရှင်းခေါ်သွားဦးနော်..
သူငယျခငျြးတှဆေိုတာ ဘဝရဲ့အရေးအကွီးဆုံး အစိတျအပိုငျးတှထေဲက တဈပိုငျးပါ။ ဒါပမေဲ့လညျး သူငယျခငျြးကနေ သူငယျဂငျြးအဖွဈပွောငျးပွီး ကိုယျ့ကို ပွနျကနျတတျတာမြိုးရှိတော့ ဘယျလောကျပဲ ခဈြတဲ့ သူငယျခငျြးဖွဈဖွဈ တဈခါတလကြေ အတျောကို မတ်ေတာတုံးစရာကောငျးတာပါ။ မတ်ေတာတုံးစရာကောငျးတဲ့ ဂငျြးကောငျတှကေတော့
သူငယျခငျြးအစုံအလငျ တဈနရောရာသှားမယျဆိုပွီး စီစဉျပွီးခါမှ အဖကျြသမားတဈယောကျ ဝငျနှောငျ့ပါလိမျ့မယျ။ အဲဒီအဖကျြသမားလညျး နှောငျ့ရော ကနျြတဲ့လူတှလေညျး တကှဲတပွားတှဖွေဈပွီး အစီအစဉျဖကျြလိုကျရရော။ ပွောသာပွောရတယျ။ အကျဒမငျလညျး အဖကျြသမားပါ :3
သူ့ကွညျ့တော့ ရညျးစားရတာ သကျတမျးမရငျ့သေး။ ကိုယျတှလေို ဝါရငျ့FAတှကေို အားရငျအားသလို ရိသဲ့သဲ့ပွောခငျြတာနဲ့၊ နှိမျခငျြတာနဲ့။ သူ့ရညျးစားနဲ့ ရနျဖွဈတော့ မကျြရညျမကျြခှကျနဲ့ ကိုယျ့ဆီပဲရောကျလာတာပဲကို။ အဲဒီလို အနှိမျပါရဂူတှဆေိုတာ မတ်ေတာတဈစကျမှကို မထားခငျြစရာပါပဲ။
၃။ ဘယျသှားသှား ပိုငျရှငျချေါလာသူ
တဈခါတလလေေး ကိုယျ့သူငယျခငျြးတှေ စုပွီး ခရီးထှကျမယျ ကွံပါတယျ။ “ငါ့ဘဲပါ ချေါလာမယျ”ဆိုတဲ့ RSမတှကေ တဈမြိုး။ သူတို့ကိုကိုနဲ့ ခြိနျးတှရေ့ငျကြ ကိုယျတှေ လိုကျရတာ ကလြို့… ငငျးငငျး။
၄။ ရှော့ပငျး ဂငျြးကောငျ
ရှော့ပငျးထှကျရငျ ကိုယျ့ပိုကျဆံ မပွုတျပွုတျအောငျ “ဟဲ့၊ အဲဒီ အင်ျကြီလေးက နငျနဲ့လိုကျတယျ” ဘာညာသာရကာ ဂငျြးလေးထညျ့ပွီး မားကကျတငျးဆငျးပေးတဲ့ သူငယျဂငျြးကောငျးတှလေညျး မတ်ေတာတုံးတဲ့ စာရငျးထဲပါတယျ။
သူငယျခငျြးတှေ ကိုယျ့အိမျလာမယျဆို ကွောကျရပါပွီ။ လာတာတော့ ဟုတျပါတယျ။ ဒငျးတို့ပွနျသှားရငျ ကိုယျ့မှာယူနီဖောငျးမပါတဲ့ သနျ့ရှငျးရေးဝနျထမျးဖွဈပွီ။ ၅နှဈကလေး အိမျလာရငျတောငျ အဲ့လောကျ လကျမသရမျးလောကျဘူး။ ယူတို့ကို အာ့ဒီအခြိနျ သိပျမုနျးပါဒနေျော..
၆။ အဲဗား ဟဟပေးသူ
ရှိတယျ ရှိတယျ။ နမေကောငျးတဲ့ ပို့ဈ တငျရငျတောငျ ဟဟပေးပွီး “မှငျးငါးစားရတော့မှာလား” ဆိုတဲ့ ကကျြသတုံး မတ်ေတာနူကောငျတှေ ကိုယျ့သူငယျခငျြးတှထေဲမှာ ရှိကိုရှိတယျ။
ဘာကိစ်စပဲဖွဈဖွဈ ဆရာဝငျလုပျလိုကျရမှ အစာကွတေဲ့သူတှေ ရှိတယျ။ ငါသိ၊ ငါတတျ၊ ငါတျောဆိုတဲ့ ဒငျးတို့ကို ပွိုငျမပွောတာ ကောငျးတယျ။ မဟုတျရငျ အခငျအမငျပကျြရဦးမယျ။
တကယျတော့လေ.. ဘယျလိုပဲ သူငယျဂငျြးတှလေို့ ပွောပွော မပွတျနိုငျတာလညျး ကိုယျတှပေါပဲ။ မတညျ့အတူနေ၊ မမွငျခြောငျးကွညျ့ အမြိုးအစားတှကေိုး 😛 တဈခုခု တိုငျပငျစရာ ရှိရငျ သခြောနားထောငျ အကွံပေး (အတညျပွောနရေငျး ဖောကျသှားတာတော့ တဈပိုငျးပေါ့လေ)၊ ငိုစရာရှိ ပုခုံးငှားပေး၊ ပြျောစရာရှိ အတူတူပြျော၊ ကိုယျနာစရာရှိ ကိုယျ့ထကျတောငျ ရငျနာပေးကွတဲ့ သူငယျခငျြးတှရှေိတာ ကံကောငျးခွငျးတှထေဲက တဈခုပဲ မဟုတျလား…
ကဲ.. ယောငျးတို့ သူငယျခငျြးတှထေဲမှာရော… အဲဒီလို မတ်ေတာတုံးစရာကောငျးပွီး မခဈြရလညျး မနနေိုငျတဲ့ သူငယျဂငျြးတှေ မရှိဘူးလား? မနျးရှငျးချေါသှားဦးနျော..
Tagged friends, Friendship, Fun, Ginger, hate, love, Types
Posted on September 15, 2017 April 18, 2018 Author Myat Moe
သဝန်မတိုတဲ့သူက မချစ်တဲ့သူပါတဲ့ စိန့် အော်ဂတ်စတင်း ပြောခဲ့စကားလေး။ သဝန်တိုတယ်ဆိုတာ ဂရုစိုက်ကြောင်းပြတာပဲလေ။ ချစ်စရာကောင်းအောင် ဘယ်လိုသဝန်တိုရလဲ ဆိုတာတော့ အောက်မှာ ဆက်ဖတ်ကြည့်နော်
Posted on May 8, 2018 July 25, 2018 Author Wathun
ကိုယ်က မေမေတွေ နေရာက ဝင်ခံစားပြီး ဖြေကြည့်ပါ ယောင်းတို့ရေ…
လေးဆယ်ကျော်အရွယ်မှာ အမျိုးသမီးတွေ ဝိတ်တက်လာတဲ့ အကြောင်းရင်း (၇) ချက်